Guurku ma jiraa galmo la’aan? | Ragga Stylish
Guurku ma jiraa galmo la’aan?
Erayada "guur la'aan galmo" wuxuu noqdaa mid ka mid ah weedho loogu raadinta badan yahay internetka. Waa wax dhaca oo durba loo soo saaray run, maxaa yeelay lammaanayaal badan uma liicaan arrinta noocaas ah illaa ay ku lug yeeshaan. Shakiga ayaa ah in lammaanaha khibrada u leh ay su'aal ka qabaan in Xaaladda noocan ah waxay gelineysaa noloshaada galmada ama guurkaada halista.
Si loo qiimeeyo faahfaahintaan inbadan, waxaa suurtagal noqotay in la qiimeeyo in tani ay tahay mid dhab ah oo dhameystiran. Jawaabtu, ka hor shakigan, waxay ku jiraan sahannada waana la ogaaday taas 12% lamaanayaasha xiriirka xasilan ma aysan sameynin galmo 3-dii bilood ee la soo dhaafay. Waxaa jiray 20% kale oo aan galmo sameynin sanad ama wax la mid ah.
Xogtaan ma muujinayaan? Ma xaqiiqo jirta oo marba marka ka dambaysa sii werweraysa? mise waligeedba way jirtay? Jawaabtu ma sahlana. Khubarada qaar waxay u yimaadaan macnaha taas Lahaanshaha xiriirka galmada ee udhaxeeya lamaanayaasha waxay keeneysaa lamaanayaal isqaba. Qaar kale waxay aaminsan yihiin in doorbidyada joogtaynta xiriirka noocan ah lagu calaamadeeyay qaab wax ku ool ah oo shaqsi ahaan u dhexeeya ragga iyo dumarka. Laga soo bilaabo halkan mid kastaaba wuxuu ku sameeyaa xawaare u gaar ah.
1 Muxuu guurku u jiraa galmo la’aan?
2 Goorma ayey dhibaato dhextaal labada dhinac?
3 Guurka galmo la'aantu ma faraxsan yahay?
4 Haddii aad rabto inaad beddesho, waa arrin waqti iyo dadaal ah
Muxuu guurku u jiraa galmo la’aan?
Erey guud ahaan Xaaladda noocan ah waxay badanaa dhacdaa marka labada lamaane ay gaaraan 40 sano. In kasta oo ay jiraan arrimo badan oo kicin kara dhaqanka noocaas ah. Looma baahna in la gaaro da'daas si ay u jirto, iyo lamaanayaal badan sameyso ballanqaad adigoo yeelanaya farac taas oo keentay inaad sameysato qaab nololeed kale. Go'aanka noocan ah wuxuu ku lug leeyahay mudnaanta iyo dabeecadaha kale ee lala yeesho la-hawlgalayaashooda, carruurta halkan joogtaa waxay ku yeeshaan sharaf.
Waxaa jira arrimo kale oo kicin kara galmada. Wadahadal la'aan, rabitaan la'aan, dhibaatooyin caafimaad, walwal, walwal, caadada oo la joojiyo… way fududahay in noloshaada galmada meel la iska dhigo sababahan awgood. Waxaa muhiim ah inuu jiro xiriir iyo ka hadalka xaalada noocaas ah.
Si kastaba ha noqotee, iyo talo ahaan, haddii ay suurtagal tahay in midkood uu isku dayo inuu ilaaliyo xiriirka qofka kalena uusan la shaqeyn, ha isku dayin inaad qanciso lamaanahaaga, ha muujin xanaaq weyn ama jahwareer. Tani waxay sii xumeyn kartaa xaaladda.
Goorma ayey dhibaato dhextaal labada dhinac?
Dhibaatadu waxay jirtaa markaad ogtahay in dhibaatadaasi jirto oo aad aamusto. Way adag tahay inaad iska dhigto mid hadlaya oo soo bandhigaya, laakiin marwalba waa inaad isku daydaa inaad naftaada geliso xaaladda qofka kale.
Waxay noqoneysaa dhibaato markii hadalka aan la doorbidin oo uusan qofku isku deyin inuu u gudbiyo rabitaankiisa, ujeedooyinkaaga, waxa aad u malaynayso ama aad u baahan tahay. Waa marka gaalo iman maadaama qofka ay dhibaatadu saameysey uu qiil ka dhigayo inuusan mar dambe dareemin inuu doonayo, wuxuu ku dhammaanayaa qaadashada ujeeddada noocan ah wuxuuna ku dhammaanayaa inuu jabiyo xiriirka
Guurka galmo la'aantu ma faraxsan yahay?
In kasta oo ay u muuqato runtii mid aan macquul ahayn ama aan la fahmi karin Lamaanayaasha badankood ee booskan kuxiran ayaa faraxsan. Lammaanaha noocan ah Way badbaadayaan iyagoo ka bilaabaya ixtiraam iyo raadinta noocyo kale oo beddelaad ah. Muhiimadda iyo waxa ugu weyni waa in la dhiso xiriir dhab ah, daacad ah oo toos ah oo ku saabsan mowduuca oo aan looga tagin inuu yahay mowduuc taban.
Noocyada noocan ah ee lamaanayaashu waxay ku raaxaystaan ​​waqtigooda inay ku qabtaan noocyo kale oo nashaadaad ah sida safarka, bixitaanka iyo wadaagista daqiiqadaha dhow, la xiriirka dabeecadda, u bixida cashada, la noolaanshaha maalinba maalinta ka dambeysa carruurtaada, iwm.
Lammaanaha kale way ku faraxsan yihiin sidoo kale nolol galmo oo aan firfircooneyn. Qaar badan oo iyaga ka mid ah waxay galmoodaan sanadkiiba hal mar dabaaldegga sanad guurada, taasna waxay ku dareemaan inay aad uga qanacsan yihiin kuwa caadaysta inay galmoodaan iyagoo aan waxba dareemin Taasi waa sababta khabiiradu ugu tixgeliyaan dhaqanka noocaan ah iyadoo kuxiran meesha ay u arkaan inay "caadi" tahay galmo. Sida Kama hadli kartid dhowr jeer oo aad galmo sameysid shaqsi walbana wuu ka duwan yahay kan kale.
Dhibaatadu waa wada jirtaa marka uu jiro iswaafaq la'aan ka dhexeysa soo dhowaanshaha. Haddii labada dhinac midkood go'aansado inuu xiriir dheeri ah la yeesho lammaanahooda oo ay jiraan khilaafaadyo, waxaa laga yaabaa inuu furmo oo markaa khilaafaadka.
Haddii aad rabto inaad beddesho, waa arrin waqti iyo dadaal ah
Marka xoojinta ficilku hoos loo dhigo ama ay durba fawdo waxaa jiri kara iska caabin weyn oo dib loogula noqdo saaxiibtinimadaas markale. Inta udhaxeysa lamaanayaashan, daqiiqado isku dhow, dhunkasho iyo salaaxid ayaa lumiyey kiisaska badankood iyo qaadida talaabooyinkan markale si khaldan ayaa loo fasiri karaa.
Isku dayida inaad cabsi galiso lamaanahaaga waxay noqon kartaa raaxo la'aan iyo waxaa ugu dhow inay u kacdo oo si iskiis ah u soo baxdo, adigoon toos u abaarin barta. Waa inaad isku daydaa inaad codka kor ugu qaaddo qaab jireed ama dhunkasho qiiro leh, laakiin ugu yaraan isku day.
Waa xaalad adag in markale la qabto tan iyo lamaanayaal badan ayaa caadeystay inay ku noolaadaan galmo la’aan mar dambana aysan u seegin. Xaqiiqdii waxay soo gabagabeeyeen inay ku raaxeysan karaan noloshooda galmo la'aan, taas oo aan la mid ahayn dhibaato, waxayna qirayaan xaaladdooda. Dadka noocan ah waxay ahaadeen inay ahaadaan oo ku dhexjiraan goobaabka dadka aan caadiga ahayn , iyada oo aan mudnaanta la siinin galmada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Guurku ma jiraa galmo la’aan?
Waxa la cuno kahor jimicsiga